Prateek Daily: स्वान्तः सुखायः
Showing posts with label स्वान्तः सुखायः. Show all posts
मधेसमा भानुभक्तको लोकप्रियता
on 7:26:00 PM0Comment
तराई–मधेसका शिक्षित वा साहित्यमा दीक्षित व्यक्तित्वहरूको मूल आधार नै नेपाली भाषा र साहित्य हो । देशभरिको संवादको मूल माध्यम नै नेपाली भाषा बनिसकेको वर्तमान परिवेशमा नेपाली साहित्यका अध्येताहरूले भानुभक्त आचार्यलाई अन्तरह्दयदेखि सम्मान गर्दछन् । भानुलाई मधेसीले पनि उच्च सम्मान गर्दै आएका छन् ।
वास्तवमा नेपालको तराई–मधेसमा अहिलेसम्मको अवस्थामा नेपाली साहित्यकारहरूकै लोकप्रियता रहेको छ । स्थानीय मातृभाषाका साहित्यकारहरूको पनि नेपाली साहित्यप्रति प्रगाढ पे्रम हुनु तथा आफ्नो लोकप्रियताको कसी नेपाली साहित्यलाई मान्नु पनि नेपाली साहित्यकारहरू बढी प्रिय बन्ने कारणहरू हुन् । मूलधारको शिक्षामा नेपाली मातृभाषी साहित्यकारहरूको करीब एकाधिकार हुनु त मुख्य कारण हो नै । हाम्रो परम्परागत शिक्षा प्रणालीले पनि यसमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपाली मातृभाषीबीच प्रख्यात साहित्यकारहरू नै तराई–मधेसमा पनि प्रख्यात छन् । ती प्रख्यात साहित्यकारमध्ये भानुभक्त आचार्य पनि एक हुन् ।
देश–विदेशमा भानुभक्त आचार्यको लोकप्रियताको एउटा मापन रामायण रहिआएको छ । कतिपय सन्दर्भमा भानुभक्त आचार्य र रामायणलाई पर्यायको रूपमा पनि मान्दछन् तर भानुभक्तको लोकप्रियताको आयाम विस्तारमा तराई–मधेसमा रामायणको भूमिका छैन । रामायणले भन्दा भानुका अन्य सिर्जनाले उनलाई यस भूगोलमा परिचित गराएका हुन् । माध्यमिक तहसम्मको सामान्य शिक्षा पाएका मानिसले उनका रचना र जीवनी पढेर प्राप्त जानकारीको आधारमा उनीप्रति सम्मान र श्रद्धा गर्दछन् । भानुको विस्तारमा विश्वविद्यालयीय शिक्षा र आधुनिक सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि सम्मानयोग्य छ । उनीप्रति श्रद्धाको कारण सामान्य मानिसबाट पनि शिक्षा लिनुपर्ने, मानवले आफ्नो निजी सुख–स्वार्थलाई धान्दै पछिको लागि कुनै कीर्ति राख्नुपर्ने अनि आफूले गरेको काम पछिका पुस्ताले पनि सम्मान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने चेतनाको विस्तार पनि हो ।
भानुको रामायणबाट देश र विदेशका नेपाली मातृभाषीबीच भाषिक एकीकरणको सन्दर्भ पनि निकै महत्वपूर्ण छ । भानुबाट देशको सेवा भाषा र साहित्यको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ र भाषा साहित्य पनि देशसेवाको माध्यम हो भन्ने कुरा सिकेका छन् ।
साथै आफ्नो मातृभाषामा साहित्यसिर्जना गरेर मातृभाषाको सेवा गर्नुपर्ने प्रेरणा पनि भानुबाट पाउन सकिन्छ । भानुबाट प्रेरणा लिएर देशका धेरै मातृभाषामा साहित्यसिर्जन हुन थालेको छ । आदिकवि भानुको प्रकाशले देशका हरेक मातृभाषा आलोकित भएको र भइरहने देखिन्छ । यसबाट भानुको अमरत्व प्रमाणित हुन्छ ।
भानुभक्त र रामायण दुवै पर्यायवाचीको रूपमा कतिपय अवस्थामा लिइने गरिएको भएपनि र तराई–मधेसमा पनि भानुभक्त आचार्य अत्यन्तै लोकप्रिय र स्थापित नेपाली साहित्यकार भएपनि रामायणको प्रभाव किन पर्न सकेन त ? तराई–मधेसमा रामायण पढिंदैन ? रामायण पढ्ने समुदायको बसोबास रहेको छैन त ?
तराई–मधेसमा पनि रामायण पढिन्छ । तराई–मधेसमा बोलिने मुख्य स्थानीय मातृभाषाका मातृभाषीहरूको सङ्ख्यालाई विचार गर्दा नेपालमा बोलिने सङ्ख्याभन्दा भारतमा बोलिनेको सङ्ख्या बढी रहेको छ । मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, अवधि आदि प्रमुख भाषालाई लिन सकिन्छ, उदाहरणको रूपमा । भाषासँगै संस्कृति पनि बढी मेल उतै खान्छ । यसले गर्दा भारतमा बढी प्रिय रहेको रामायण नै यस क्षेत्रमा पनि बढी लोकप्रिय हुुनु स्वाभाविक हो । भारतमा तुलसी दास र वाल्मीकिको रामायण धेरैले मन पराउँछन् र सोही अनुसार तिनै रामायणहरू बढी पढिएका छन् । यसैगरी, प्रायः हरेक मातृभाषामा रामायण प्रकाशित भइसकेको छ । आफ्नो मातृभाषामा रामायणको स्वाद पनि सम्बन्धित मातृभाषीहरूले लिइरहेका छन् । मातृभाषामा रामायण पढ्दा र हिन्दी सिरियलमा रामायण हेर्दा जुन आनन्द स्थानीयले प्राप्त गर्दछन्, त्यो आनन्द नेपालीमा लेखिएको रामायणमा स्थानीयले पाउन सकेका छैनन् । अझ २०६ वर्ष पहिले (विसं १८७१) जन्मेका र १५२ वर्ष पहिले (६ असोज १९२५) मृत्यु भएका भानुभक्तको रामायणको भाषा पनि वर्तमान नेपाली भाषाको भन्दा पृथक प्राथमिककालीन नेपाली साहित्यको भाषाजस्तो छ, जुन गैरनेपाली मातृभाषीको बोधगम्यताभन्दा बाहिर हुन गएको छ ।
संस्कृतिको विभिन्न क्षेत्रका हिन्दी भाषाको प्रभाव रहेको कारण हिन्दीमा अनुवाद गरिएका रामायणहरू पढ्न वा मातृभाषाका रामायण पढ्दा पाइने आफ्नोपन भानुभक्तीय रामायणमा नपाइँदा उति चर्चित हुन नसकेको हो । यद्यपि तराई–मधेसमा भानुभक्त आचार्य अन्य साहित्यकारहरू जस्तै प्रिय छन् ।
भानुभक्त आचार्यलाई मोतीराम भट्टले परिचित गराएका हुन् । मोतीराम भट्ट पनि तराई–मधेसमा प्रिय साहित्यकार हुन् । उनले नेपाली साहित्यमा भित्र्याएको गजल आजभोलि तराई–मधेसका सबैजसो भाषामा लेखिन्छन् । यो चर्चाको विधा पनि भएको छ । जब कसैले मोतीराम भट्टको विषयमा पढ्छन्, तब स्वाभाविकरूपमा भानुभक्त आचार्यलाई पनि पढ्छन् । यसबाट यो स्पष्ट हुन आउँछ कि भानुभक्त आचार्यलाई दोहोरो पढ्ने चलन छ । भानुभक्त आचार्यलाई नेपाली साहित्यको आदिकविको उपाधि भट्टले नै दिएका हुन् ।
भानुलाई नेपाली साहित्यको भानु पनि भनिन्छ । भानुको अर्थ सूर्य हुन्छ र भानुदय भनेको सूर्योदय हो । नेपाली साहित्यको सूर्योदय भानुबाट भएको मानिन्छ । यद्यपि सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले नै धरतीमा उज्यालो भइसकेको हुन्छ । धरतीबाट अँध्यारो भागिसकेको हुन्छ । भानुभक्त आचार्यभन्दा पहिले पनि नेपाली भाषामा साहित्यसिर्जन गर्नेहरू थिए । अन्य विभिन्न सर्जकले पनि साहित्यको विभिन्न विधामा विभिन्न किसिमले कलम चलाएका थिए । तर भानुभक्तबाट नेपाली साहित्यले जुन किसिमको सेवा प्राप्त गर्न पायो, त्यस किसिमको सेवा अन्य सर्जकबाट हुन नसकेको पाइन्छ । यसैले भानुको महिमालाई सर्वोपरि स्वीकार गरिएको छ । अझ तराई–मधेसमा त भानुभक्त आचार्यभन्दा पहिले पनि सर्जकहरू थिए, जसले साहित्यको सेवा गरेका छन् भन्ने विषयमा खासै प्रचारप्रसार हुन नसकेको देखिएको छ ।
भानुको प्रियता यस अर्थमा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ कि कतिपय सन्दर्भमा मातृभाषाका साहित्यकारहरूलाई फलानो भाषाका भानुभक्त, फलानो भाषाका मोतीराम । यसरी मातृभाषाको सेवा गर्नेलाई पनि नेपाली भाषाका साहित्यकारहरूको अलङ्कार दिइनुको अर्थ हो भानु र मोतीले गरेका सेवा जस्तो आफ्नो मातृभाषाको सेवा अहिले गर्नुपरेको छ । हो, यसरी नितान्त मातृभाषाको सेवामा जुटेकाहरूले पनि भानुलाई सम्मान गरिरहेका हुन्छन् । यसबाट पनि भानुभक्तको लोकप्रियता बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ । यथार्थमा भानुभक्त तराई–मधेसमा पनि लोकप्रिय रहेका छन् । उनको स्मृति दिवस वा जन्मदिवसमा उनलाई सम्झे पनि र नसम्झे पनि ।
बौद्धिकता र प्राज्ञिक पत्रकारिता
- सञ्जय मित्र
आजभोलि कपि–पेस्ट पत्रकारिता फस्टाएको छ। अझ सामाजिक सञ्जालले नै पत्रकारिताको काम गरिरहेको छ। पत्रकारहरूको अब कामै छैन। अलिकति पनि मिहिनेत गर्नुपर्दैन अब पत्रकारलाई। कतै केही भयो कि तुरुन्त सामाजिक सञ्जालमा आइहाल्छ। त्यसैलाई अलिकति यताउति मिलायो र समाचार बनायो। उस्तै परे एकाधलाई फोन ग–यो र समाचार बनायो।
पत्रकारिताको वास्तविकता हुँदै होइन यो। हो, धेरैले परिश्रम गर्न चाहँदैनन् र एउटा अनलाइनमा आएको समाचारलाई कपि गरेर आफ्नोमा पनि हाल्दछन्, लेखलाई समेत यसै गरी प्रकाशन गरेको पाइन्छ तर यसको अर्थ यो हुँदै होइन कि पत्रकारको कुनै कामै छैन। सबैले विज्ञप्तिकै भरमा पत्रकारितालाई धानेका छन्।
पत्रकारिताको मेन स्ट्रिममा जुन किसिमको तँछाडमछाड रहेको छ, प्राज्ञिक पत्रकारितामा यस किसिमको लिगलिग दौड रहेको छैन। प्राज्ञिक पत्रकारिता भन्नुको अर्थ साहित्यिक पत्रकारिता हो र मेन स्ट्रिमको पत्रकारिताभित्र पनि दार्शनिक, साहित्यिक चिन्तन र खोजको पत्रकारिता हो। वास्तवमा मेन स्ट्रिमको पत्रकारितालाई पनि विचार गर्ने हो भने बजारमा ठूलो नाक देखाएर हिंड्नेको पत्रकारितामा गुदी कति रहेछ र बोक्रा कति रहेछ भन्ने कुरो स्पष्ट देखिन्छ। मेन स्ट्रिमको भनिने कतिपय पत्रकारिताको उदाहरणले त बौद्धिकता, दार्शनिकता तथा साहित्यिकताको महत्व अझै बुझेका छैनन्। हामी जे देख्छौं, त्यहीं लेख्छौं भन्दै पत्रकारितालाई समाजको ऐना भनी सतहको कुरा मात्रै गर्दछन्। ऐनाले बाहिरी सतह देखाउने हो, भित्री मर्म कहिल्यै प्रदर्शन गर्न सक्दैन। ऐनाले आफूलाई मात्र सोझो देखाउने हो, अरूको अनुहार देखाउन बाङ्गो हुनैपर्छ। बाङ्गो ऐनाले सही विम्ब कसरी देखाउन सक्छ ? यस कारण ऐनाले यथार्थसम्म देखाउन सक्दैन भन्ने कुरो बुझ्ने सामथ्र्य नभएको पत्रकारिताले नयाँ धारणा कसरी दिन सक्छ ? के ऐनाले नयाँ धारणा, विचार, भविष्यको मार्ग तथा अन्तर्मनको व्यथा प्रदर्शन गर्न सक्छ ? पत्रकारितामा प्राज्ञिक शून्यता बढी हुँदै गएको अवस्थालाई नै कुनै विद्वान्ले वर्तमान पत्रकारिता कपि–पेस्ट पत्रकारिता हो भनी बताएपछि त्यसैको कपि–पेस्ट विचार आउन थालेको हो। यहाँ विचारको कपि–पेस्ट पनि हो।
देशमा ज्ञानविज्ञानको केन्द्र काठमाडौं हो भन्ने एउटा यथार्थ हो र थियो पनि। काठमाडौंबाहेक यस देशकै भूमिमा पत्रकारिता चुहाउने वीरगंज हो। वीरगंज मोफसलीय पत्रकारिताको जननी हो। इतिहासले यही खोल्दछ। अन्यत्रबाट के भयो, त्यो उसैले बुझोस् तर वीरगंजले त प्राज्ञिक पत्रकारिताको सुरुआत गरेको थियो। अहिले वीरगंजको प्राज्ञिक पत्रकारिता कस्तो छ ? कहाँ छ वीरगंजको पत्रकारिता ?
यो प्रश्न होइन। उत्तरको खोजीको चाहना हो।
वीरगंज गरिमा हो, गर्व हो। यहाँको प्राज्ञिक पत्रकारिता देशको धरोहर हो। र वर्तमान परिदृश्यमा विश्व प्राज्ञिक पत्रकारिताको लागि एउटा उदाहरणीय प्रयास हो तर आज करीब शून्यको अवस्थामा किन ? इतिहासमाथि किन लेउ लागेको छ ? लेउ पन्छाएर बौद्धिकताको बीउ उमार्ने पत्रकारिताका लागि वीरगंजको माटोलाई किन कङ्क्रिटले छोप्तै लगेको छ। कङ्क्रिटमा हार्दिकता हुँदैन, आत्मा हुँदैन। माटोमा प्रेम पनि हुन्छ। माटोमा सिर्जनात्मकता हुन्छ। आज वीरगंजले धान्नै नसक्ने हवाई साहित्यिक पत्रिका पनि निकाल्न नसक्ने हैसियतमा त छैन। देशको आर्थिक राजधानी हो। प्रदेशको वैकल्पिक राजनीतिक राजधानी हो अघोषित। देशको अर्थतन्त्रको मुटु छाम्ने वीरगंजले चेतनाको नयाँ दीपक बाल्ने, अँध्यारोलाई उज्यालो दिने र इतिहासको नवीन ढोका खोल्ने पत्रकारितामा पछाडि किन आफूलाई पछाडि पारेको होला ?
वीरगंजले गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा हो। वीरगंजमा प्राज्ञिकता शून्य पत्रकारिताको लामो इतिहास छ, इतिहासको पनि इतिहास छ, वर्तमान पनि कमजोर छैन भन्ने प्रमाणको खोजी हो।
साहित्यिक पत्रकारितालाई सिर्जनात्मक पत्रकारिता र नयाँ पत्रकारिता भनिन्छ। साहित्यले भाषाको नेतृत्व गर्छ भन्ने मान्यतामा पनि आधारित हुनुपर्छ यी भनाइहरू।
साहित्यिक पत्रिका निकाल्ने व्यक्तिले मास जर्नालिज्मजस्तो तात्क्षणिक चर्चा नपाउने र राजनीतिक तथा सामाजिक हाकिमहरूको नजरमा नपर्ने हुनाले मास मिडियातर्फ बढी आकर्षण देखिएको हो। अर्को कारण साहित्यिक पत्रकारिता आफैंमा रोजगार नहुनु पनि हो। यो रोजगार नहुनु वा यसलाई रोजगारबाट वञ्चित गराइनु हो, समीक्षाको सन्दर्भ हो। घटनामूलक र दैनिक सरोकारमूलकता यसको ठाडो विषय नहुँदा पनि समाजले यसलाई पछाडि पारेको हो। तर साहित्यिक पत्रकारितामा पछाडि परेको समाज भने उच्च बौद्धिक वा प्राज्ञिक क्षेत्रमा पछाडि पर्दै जाने, त्यहाँ खोजमूलकता कम हुँदै जाने र त्यागको भावना पनि कम हुँदै जाने हुन्छ। समर्पणको अभाव पनि बिस्तारै नदेखिएला भन्न सकिन्न।
साहित्यिक पत्रकारिता नयाँ पत्रकारिता हो। साहित्यले नयाँ सोच ल्याउने र त्यसको चर्चा गर्ने काम साहित्यिक पत्रकारिताले गर्दछ। यसै साहित्यिक पत्रकारितालाई ‘पपुलर लिटरेरी’ पनि भनिन्छ। हो, जसले कृति प्रकाशन गर्न सक्दैन वा जसको कृति प्रकाशन हुँदैन, उनलाई समाजमा परिचय स्थापित गराउने र साहित्यको क्षेत्रमा चिनाउने काम यस प्रकारको पत्रकारिताले गरेको हुन्छ। उच्च बौद्धिक क्षेत्रमा सिर्जनामार्फत् चिनाउने पत्रकारिता नै यही बौद्धिक साहित्यिक पत्रकारिता भएकोले यसको विकास हुनु आवश्यक छ। आजका धेरै प्रख्यात साहित्यकारहरूको कृति प्रकाशित हुनुभन्दा पहिले सबैभन्दा पहिलो रचना कुनै पत्रिकामा नै प्रकाशित भएको थियो।
साहित्यिक पत्रिकाको स्वरूप हवाई नै किन नहोओस् तर यसलाई सितिमिति कसैले फालिहाल्दैन। रचनाको स्वादका लागि पनि धेरैले पछिसम्म जोगाएर राख्दछन्। यसैले पनि यसलाई पपुलर लिटरेरी भनिएको हुनुपर्छ। अझ नवसर्जकका लागि त यो पपुलारिटी कमाउने र उत्साह बढाउने साधन हुन्छ। पहिलो औपचारिक कृति प्रकाशन हुँदा जति खुशी हुन्छ, त्यसभन्दा पनि धेरै खुशी कसैको पहिलो रचना कुनै प्रचलित साहित्यिक पत्रिकामा प्रकाशन हुँदा हुन्छ। फेरि प्राज्ञिक क्षेत्रमा साहित्यिक पत्रिका आफैंमा आफ्नो रचनाको स्तरको परीक्षण पनि हो। सिर्जनाको मोड थाहा पाउने नयाँ मार्ग पनि हो।
वीरगंजले जति गरेको छ, त्यो अब बिस्तारै विस्मृतिको कङ्क्रिटले छोपिंदै लगेको छ। कसले गरे, के वा के के गरे ? भन्ने खोज्ने वा बताउनेहरूको पनि अभाव हुन थालेको छ। वीरगंजको प्राज्ञिकता अब बाहिरबाट देखाउनुपर्ने अवस्था आउँदैछ। वीरगंजभन्दा निकै पछि प्राज्ञिक पत्रकारितामा पाइला टेकेका नजीकका शहरहरू हेटौंडा, भरतपुर, जनकपुरको वर्तमानसित वीरगंजको तुलना गर्न सकिन्छ ?
इतिहासमा वीरगंजले निकालेका साहित्यिक पत्रिकाहरूको इतिहासको उत्खनन एउटा पाटो हो तर वर्तमानमा वीरगंजको साहित्यिक अनुहार कुन पत्रिकामा देखिन्छ भनेर कसैले प्रश्न गर्दा सजिलैसित भन्ने सम्भावित उत्तर हुन सक्छ– तराईका जिल्लामध्ये पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई नछुने जिल्ला कुन हो ? हो, सम्भवतः तराईका जिल्लामध्ये साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन नहुने जिल्लाको खोजी सामान्यज्ञानको राजमार्गको प्रश्नजस्तै नबनोस्।
पर्सा र मुख्य गरी वीरगंजमा रहेका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले यस प्रकारको माहोल कम्तीमा बनाइदिनुपरेको छ कि जसले वर्षमा कम्तीमा चार अङ्क पत्रिका निकाल्न सकोस्। साहित्यिक पत्रकारिताको क्षेत्रमा वीरगंजको पहिचान बन्न सकोस्। जीवनका धेरै क्षेत्रमा वीरगंज धेरै अगाडि छ तर वीरगंजको साहित्यिक पत्रकारिताको अङ्ग बिस्तारै कमजोर हुन थालेको छ।
आधुनिक पत्रकारिताका सबै क्षेत्रमा वीरगंज अगाडि रहेको छ। सबै पत्रकारितामा वीरगंजको ठूलो सम्मान छ। यो सम्मान वीरगंजले आफ्नो परिश्रमले आर्जन गरेको हो। यसका लागि धेरै सङ्घर्ष गरेको छ वीरगंजले। प्राज्ञिक पत्रकारिता भनेर चिनिने साहित्यिक पत्रकारिताको उज्यालो विगतलाई वीरगंजले निकट भविष्यमा फेरि पनि पछ्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
दुखन धामीको शासनकाल
on 4:35:00 PM0Comment
सामाजिक सुखको आफ्नै सत्ता हुँदोरहेछ। सत्तासुखको प्राप्तिमा मानिस बाहिरको संसारसित जोरी खोज्दो रहेछ। आफूलाई श्रेष्ठ बताउन प्रत्यक्ष र छद्म प्रयास गर्दोरहेछ। सामाजिक सुख एकातिर सामाजिक सत्तासित सम्बन्धित छ, जसले प्रतिष्ठा र अहम्को ऐनामा आफ्नो अनुहार देख्दछ।
सुखको खोजी नगर्ने कोही हुँदैन। जसले अरूको नजरमा सुखको प्राप्ति गरेको छ, उसले झन् बढी मिहिनेत गरेर सुखको खोजी गरिरहेको हुन्छ। वर्तमान सुखलाई टिकाउने चुनौतीहरूसित सङ्घर्ष गर्दै थप सुखको प्राप्तिको अभिलाषाले निरन्तर ‘लिगलिग’ दौड गरिरहन्छ मान्छे। यस प्रकारको सुखको खोजीलाई भौतिक सुखको खोजी भन्न सकिन्छ।
सुख आफैंमा अपरिभाषेय छ। यससित अपरिचित भने कोही छैन। हरेकले सुखको अनुभूति गरेको हुन्छ। सुखको अनुभूति नगरेको मानिस कहिल्यै पनि म दुःखी भएँ भनेर भन्न सक्दैन। सुख भोग्ने र अनुभूति गर्ने दुई किसिमका हुन्छन्। भोग्ने भनेको भौतिक र अनुभूति गर्ने भनेको आत्मिक सुख हुनुपर्छ। दुवैमध्ये कसको संसार ठूलो छ ?
आत्मिक सुखको खोजीको संसार संस्कृतिको घेराबन्दीमा हुन्छ। उन्मुक्त हुँदैन। स्वच्छन्द हुँदैन। हो, आफ्नो संस्कृति र परिवेशको बलियो तर अदृश्य पर्खालभित्र रहेर मानिस आत्मिक सुखको खोजी गरिरहेको हुन्छ। सुखको खोजीमा रमाइरहेको हुन्छ। यदि सोध्ने हो भने यस प्रकारको सुखको खोजीको प्रमाण अनेक बन्न सक्दछ तर आत्मिक सुखको पनि सत्ता हुन्छ। सत्ताधारी हुन्छन्। सत्तामा बस्नेले आशीर्वाद बाँडिरहेको हुन्छ। आशीर्वाद पाउन मानिसले प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ।
दुखन धामीले आत्मिक सुखको प्रसाद वितरणमा पचपन्न वर्ष बिताए, अर्थात् पचपन्न वर्षसम्म एउटा आत्मिक सुखको खोजी गर्नेहरूको सत्तामाथि विराजमान रहे। उनी आफैं सुखी भए/भएनन्, एउटा पक्ष हो तर अर्को पाटो यो हो कि उनको शासनसत्ताले आत्मिक सुख खोजी गर्नेहरूको विशाल साम्राज्य खडा गरेको थियो। हरेक पाँच वर्षमा उनको सत्ताको अनुमोदन लाखौं श्रद्धालुले गर्दथे।
महागढीमाई नगरपालिकाको गढीमाई मन्दिरमा हरेक पाँच वर्षमा लाग्ने मेला दुखन धामीको शासनकालमा उत्कर्षमा पुग्यो। दुखन धामीले केही हप्ता पहिले अन्तिम सास लिए, आफूलाई पञ्चभूतमा मिलाए। उनी यस धर्तीबाट बिलाए। अब उनको शासनकालको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
दुखन धामी मूल पुजारीको आसनमा विराजमान हुँदाको समय वा त्यसभन्दा पहिले गढीमाई र यहाँको मेला प्रसिद्ध थिएन भन्न खोजेको होइन। सयौं वर्षदेखि मेला लाग्दै आएको हुनाले श्रद्धा र प्रसिद्धि दुवै उत्तिकै थियो तर पचपन्न वर्षमा गढीमाई मेलाको प्रसारले उत्कर्षको यात्रा ग–यो। पछिल्लो आधा शताब्दीभन्दा लामो कालपछि वर्तमानसम्म आइपुग्दा पहिले बरियारपुरको गढीमाई भनेर सीमित प्रचार हुन्थ्यो तर अब महागढीमाई भनेर नगरपालिकाको नाम नै राखिएको छ। गढीमाईको पहिचानबाटै स्थानीय तहको पहिचान हुनु ठूलो कुरो त होइन, तर पहिचानको सर्वस्वीकृति भने निकै महत्वपूर्ण छ। भारतको झारखण्डको देवघरलाई देवघर भनेर जतिले जान्दैनन्, त्योभन्दा हजारौं गुना बढीले बाबाधाम भनेर जान्दछन्। गढीमाईको सवालमा यो हुन पाएन। यसैले सर्वस्वीकृतिको महागढीमाई एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रूपमा देखिन्छ।
गढीमाईलाई अब महागढीमाई भनेर पूजा वा श्रद्धा गर्न थालिएको छ। दुखन धामीको शासनकालमा नै आस्थाको महागढीमाई, भूगोलको महागढीमाई तथा मेलाको महामेला वा नेपालको महाकुम्भको सर्वमान्यता पाउन सफल भएको हो। यस अर्थमा पनि दुखन धामीको शासनकाल उच्च कोटिको सफल देखिन्छ।
कतिपयले अन्धविश्वास पनि भन्लान्। अन्धविश्वास पनि एउटा विश्वास हो र विज्ञान पनि एउटा विश्वास हो तर गढीमाई देवी, गढीमाई मन्दिर, गढीमाई मन्दिर परिवेश र गढीमाई नामप्रति आस्था एवं श्रद्धा राख्नेले त्यहाँका पुजारीप्रति पनि निस्सन्देह श्रद्धा राख्छन्। विभिन्न क्षेत्रका निकै ठूला मानिसलाई पनि धामीले दर्शन गराए। धामीले पनि आशीर्वाद दिए। पूजा गराए। धामीको आशीर्वादको मूल्य र महत्व कुनै पनि मानेमा कम थिएन।
दुखन धामी जो लाखौंको लागि वरदान थिए, आशीर्वाद थिए। गढीमाई र भक्तजनबीचका वाहक थिए। जसको शरीरमा स्वयम् गढीमाई आएर उनी काँप्थे भन्ने विश्वास थियो। उनै दुखन धामी वास्तवमा निकै सरल थिए। उनको जीवन अत्यन्त सरल थियो।
अति सरल व्यक्तित्वका धनी, शान्त स्वभाव र बिल्कुलै घमण्ड नभएका व्यक्तित्वको रूपमा धामीको परिचय थियो। अर्थ वा द्रव्यप्रति पनि उनको त्यति मोह थिएन। अरूलाई हात जोडेरै सम्मान गर्ने उनको बानी थियो। नरम बोली बोल्दथे। सामान्य भेटमा पनि उनी यस्ता बुझिन्थे कि एउटा अदृश्य आकर्षणका पुञ्ज हुन्। किन किन उनलाई भेटेपछि उनीप्रति अभ्यन्तरमा श्रद्धाको धरहरा ठडिन्थ्यो। उनलाई भेटेर छुट्टिएर टाढिंदै गएपछि श्रद्धाको त्यो धरहरा झन्झन् अग्लिंदै जान्थ्यो। कता कता अभ्यन्तरमा लाग्थ्यो कि उनी एक निष्काम व्यक्तित्व हुन्। समाजले उनीबाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ।
आफ्नो गाउँमा अति सामान्य व्यक्तित्व दुखन धामी गढीमाई मेलाको समयमा कस्ता महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन्थे ? लाखौं मानिसका लागि श्रद्धाको सर्वोच्च प्रतिभा बनेका धामी तडकभडकमा विश्वास गर्नेभन्दा अभ्यन्तरमा हेर्दथे। यही नै उनको सम्पत्ति थियो।
अहिलेको परिचित महागढीमाई दुखन धामीको शासनको एउटा विशाल पाटो हो। महागढीमाईले यति धेरै प्रसिद्धि पाउँदा पनि उनी गुमनाम बनिरहे। महागढीमाईको विशाल प्रसिद्धिको सुवासमा उनको गुमनामीको सुगन्ध विस्तार भएको छ। नामले कसैले उनलाई नचिनून् तर उनको कामले उनलाई सदैव चिनाइरहनेछ। उनको शान्त स्वभावले आस्थाको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति सम्पन्न गरेको छ र महागढीमाई नगरपालिकाको नामकरण त्यसको प्रतीकको रूपमा विश्वसामु आइफेल टावरभन्दा अग्लो भएर उभिएको छ।
आत्मिक सुख प्राप्तिको यात्राका लाखौं यात्रीका लागि एउटा आदर्श व्यक्तित्वको महाप्रस्थान यति शान्तिपूर्ण रह्यो कि आस्थाको शान्त पोखरीमा कुनै हलचल भएन। यो सुखद आश्चर्य हुनुपर्छ। आस्थाको महाप्रतीक महागढीमाई नगरपालिकाको गढीमाई मन्दिरको पचपन्न वर्षसम्म पुजारी रहेका दुखन धामीप्रति शत्पुष्प श्रद्धाञ्जलि !
आख्यान निबन्धको दोसाँधमा जीवाश्म
on 12:27:00 AM0Comment
संस्कृति, साहित्य, भाषा र माटो जानेर– नजानेर, चाहेर–नचाहेर, बुझेर–नबुझेर बचाइराखेका लाखौं मुटुमा समर्पण गरिएको शीतल गिरीको ‘जीवाश्म’ ओरिएन्टल पब्लिकेशन, काठमाडौंले बजारमा ल्याएको छ । समर्पण पढ्दा नै यस कृतिको विषयवस्तुको आकलन गर्न सकिन्छ र कृतिको उद्देश्य बुझ्न सकिन्छ ।
आख्यानको तुलनामा निबन्ध बढी स्वतन्त्र हुन्छ । आख्यानमा केही बन्धन कसिला हुन्छन् तर निबन्धमा स्वच्छन्दता बढी हुन्छ । निबन्धमा हुने आख्यानत्मकता र आख्यानमा हुने निबन्धात्मकतामा भिन्नता हुन्छ । यस कारण कतिपय अवस्थामा निबन्धात्मक तत्वव भएको आख्यान र आख्यानात्मक तत्व भएको निबन्ध कहिलेकाहीं निकटजस्तो भएर पनि निकट हुन सकेको हु“दैन । निबन्धको आयाम वृद्धि हु“दै जा“दा आख्यानकै स्वरूप ग्रहण गर्ने हुन्छ । यसकारण पनि लघु आयामका कतिपय आख्यान र निबन्धमा कहिलेकाहीं असमञ्जस उत्पन्न हुन्छ ।
राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले पनि ‘जीवाश्म’ महत्ववपूर्ण कृति हो । यसका करीब सम्पूर्ण निबन्धले ऐतिहासिक विषयवस्तुमा भौगोलिक राष्ट्रियतालाई वरण गरेका छन् । वर्तमानमा भूगोलसित राष्ट्रियता अत्यधिक घुलमिल देखिएको विश्व परिदृश्यको आलोकमा यो कृति निकै चहकिलो देखिन्छ । गर्विलो, दर्बिलो प्रागऐतिहासिक विषयवस्तुमा माटोको सुगन्ध पाइनु यस कृतिको विशेषता बनेको छ । इतिहासलाई पनि कतै आख्यान र कतै निबन्ध तथा कतै दुवैको स्वादमा प्रस्तुत गरेर गिरीले तथ्य र तर्कको मिश्रणमात्र गरेका छैनन्, अनुमानलाई पनि सही निकास दिएका छन् । कृतिको तौल निबन्धहरूको निष्कर्षले बढाएका छन् ।
अधिकांश निबन्ध काठमाडौं केन्द्रित ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक विषयवस्तुमा आधारित छन् । काठमाडौं उपत्यकाको सम्भवतः पहिलो बासिन्दा भेडापाल हुन् । उनीहरूको आफ्नै विशिष्ट संरचना र जीवनशैली थियो । भारतको विभिन्न ठाउ“सम्म समृद्ध बेपार थियो, आफ्नै सङ्गठन र संस्कृति थियो । महिषपाल शासकको विषयमा त नेपालको औपचारिक इतिहासले पनि धेरै कुरा भनेको छ । यद्यपि महिषपाल शासनको धेरै पक्षमाथि अझै प्रकाश पर्न बा“की छ, तर पनि यस वंशबारे कतिपय कुरा ज्ञात हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा भेडापालभन्दा उन्नत र धेरै सङ्ख्यामा महिषपालको प्रवेशले पुरानो जाति नया“मा समाहित भयो भनिएको छ । यी दुवै जाति गणप्रधान र गणको प्रमुख महिला हुने किसिमका थिए ।
विक्रमको ४५६० वर्ष पूर्वताका उपत्यका आसपास माछामार जातिको आगमन भएको मानिएको छ । सा“गाबाट सिन्धुली, रामेछाप आदि ठाउ“तिर माछामारहरू लागे । यिनीहरू उपत्यका छेउछाउमा बाक्लै सङ्ख्यामा रहेका थिए । कीर्तिपुर भेगमा मत्स्यगाउ“बाहेक अहिले कुनै प्रमाण छैन । यसो भन्नुको तात्पर्य यो पनि हो कि मत्स्यगाउ“ माछामार जातिले बसालेको गाउ“ हो जसले आज उनीहरूको परिचय खोजिरहेको छ ।
उपत्यकामा गोपालहरूको पनि लामो समय शासन चलेको पाइन्छ । गोपालहरूको ठूलो समूहले यस क्षेत्रको वातावरणमा गरेको सिंचाइले उनीहरूलाई इतिहासको अमर पात्र बनाइदिएको छ । तथागतको उपत्यका आगमनपछि नै बौद्धधर्मको प्रचार भएको हो । तथागत र उनको धार्मिक यात्राको उनको जीवनमा व्यापक विस्तार भइसकेको थियो । अनेकन अनुयायी थिए । विरूपाक्षलाई नेपाल उपत्यकाको प्रथम उपासक भनिएको छ । कलिङ युद्धपछि सम्राट् अशोकमा आएको परिवर्तनको कथा इतिहासमात्र होइन । यसको महतत्वव अनेक कोणबाट केलाइएको पाइन्छ । सम्राट् अशोकले आप्mनो राज्य परित्याग गरे । भिक्षु बने । सिद्धार्थ गौतम युवराज भएर राज्यत्याग गरेका थिए र अशोक चाहिं सम्राट् भएर बुद्धपथगामी भएका थिए । उनी काठमाडौं आउ“दा छोरी चारुमतिलाई पनि लिएर आएका थिए । नेपालको इतिहासमा पनि सम्राट् अशोकको नाम श्रद्धाले लिइन्छ । चारुमतिले बसोवास गरेको क्षेत्र अचेलको चावहिल (चावेल) हो भन्दै एउटा सुन्दर चित्रण गरिएको छ यस विषयवस्तुलाई ।
भौगोलिक परिवेश पटना (पाटलीपुत्र) को भए पनि सन्दर्भ नेपाल र नेपालीको छ । त्यहा“को अशोक वाटिकामा लाग्ने हाटमा नेपाली सामानको ठाट बेग्लै हुन्छ । र त सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्यले मुक्तकण्ठले सामानको प्रशंसा गर्दछन् र नेपालीको इमानदारीपनको बखान गर्दछन् ।
सधैं बहस र चर्चामा आइरहने नेपालको राष्ट्रिय संवत् विक्रम संवत् हो । कतिपयले यसलाई नेपालको मौलिक संवत् मानेका छन् त कपियले बाहिरबाट आएको ठानेका छन् । ‘जीवाश्म’ले नेपालकै संवत् रहेको किटान गरेको छ । पुनर्जन्मा र प्रतिभा पढेपछि याज्ञवल्क्यप्रति पहिलेको धारणा नै बदलिन्छ । पुनर्जन्माको प्रतिभाको विषयमा यसले धेरै कुरा खोलेको छ । जनकको सभामा पनि कहिलेकाहीं अन्याय हुन्थ्यो भन्ने भाव यसले दिएको छ ।
आभीरलाई मूलतः ग्वाला जाति भनिएको छ । समयक्रममा आभीरहरू पहाडका विभिन्न ठाउ“मा विभिन्न थरले चिनिएको आभीर निबन्धले मानेको छ । मातृभक्त मानदेवलाई इतिहासले असल राजाको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसैगरी भृकुटीबारे पनि नवीन किसिमले अन्वेषण गरिएको छ । भृकुटीमाथिका केही परम्परागत धारणामा यस कृतिले नवीन प्रकाश पारेको छ । लिच्छविकालीन एकजना कवि बुद्धकीर्तिको विषयमा सोधखोज गरिएको रचना हो कवि बुद्धकीर्तिको सत्य । पशुपति क्षेत्रमा एउटा शिलालेखमा प्राप्त कविताले बुद्धकीर्तिको कवित्वको परिचय दिएको र उनीबारे धेरै सोधखोज गर्नुपर्ने बताएको छ । काठमाडौंबाट एउटा निबन्ध डोटीतिर मोडिएको छ । स्वतन्त्र र शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको सिंहपुरमा प्रतिभाको कदर हुन्थ्यो । निबन्धको आख्यानको प्रस्तुति रसिलो छ ।
सकेसम्म अरनिकोमाथि न्याय गरिएको छ र अरनिकोमाथि प्रकाश पारिएको छ । नेपालदेखि चीनसम्मको यात्रा र सफलताको गाथालाई सम्मानपूर्वक प्रस्तुत गरिएको छ ‘अरनिको र आदर्श’ भन्ने निबन्धमा । अर्को निबन्ध मोडिएको छ सिञ्जातिर । क्राचल्लको उदारता र बुद्धिमानी तथा वीरताले गर्दा उनको यश सर्वत्र फैलिएको बताइएको छ–रुद्र सिंहको मुक्तिमा । रुद्र सिंहलाई पराजित गरी फेरि राजा बनाएको र रुद्र सिंहले पनि धर्मको निर्वाह गरेको आख्यानात्मक प्रस्तुतिमा मौलिकता देखिन्छ । देउसी भैलोको गीतमा आउने बलिराजको खोजी गरिएको निबन्ध हो ‘देउसी–भैलो, बलिराज र इतिहास’ । निबन्धकारले जुम्लाका राजा बलिराज भएको ठम्याएका छन् । रौतहटको राजदेवी मन्दिरको स्थापनाको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ – ‘राजदेवी र नर्मदा’ । नर्मदा विलक्षण प्रतिभा भएकी नर्तकी हुन् । यी नृत्याङ्गनाले गर्दा तत्कालीन मकवानपुर र कान्तिपुर राज्यमा मनोमालिन्य भएको उद्घाटन गरिएको छ । टिस्टुङ कोटमा प्रचलित बा¥ह वर्षे नाचको इतिहास कोट्याइएको छ ।
शुद्ध ऐतिहासिक विषयवस्तु हो ‘लाचार महारानी’ । महारानी राजराजेश्वरीप्रति सहानुभूति राखेर मूल्याड्ढन गरिएको र उनी कसरी अन्यायमा पर्न विवश भइन् भन्ने बताइएको छ । ‘जोसमनी सम्प्रदाय र लखन थापा’मा राणा शासनका संस्थापक जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध एक किसिमको आन्दोलन गर्ने पात्रको रूपमा लखन थापालाई चिनाइएको छ । उनलाई फँ“सी दिइएको थियो । विवाह र व्यक्तित्वभित्रको आख्यान बडो सुन्दर छ । दुई संस्कृतिका दुई पात्र भीमसेन र हिडिम्बाबीच भएको प्रेम र विवाहलाई रोचकतासाथ प्रस्तुत गरिएको छ । हिडिम्बपुर नेपालको कुनै ठाउ“ भएको बताइएको छ । यो ठाउ“ सम्भवतः वर्तमान हेटौंडा हो । यसैगरी साहित्य र शहीदमा मकैखेतीका सर्जक कृष्णलाल अधिकारीमाथि न्याय गरिएको छ । उनलाई प्रथम साहित्यिक शहीद मानिएको छ । पूर्वी नेपालको विद्रोहिणी योगमायाको चरित्र, व्यक्तित्व र कृतित्वमाथि प्रकाश पारिएको निबन्ध हो ‘योगमाया र जलसमाधि’ । उनको जलसमाधिप्रति सहानुभूति त छैन तर उनको जुनीलाई नै विद्रोहको पर्यायको रूपमा स्वीकार गरिएको छ । शहीद गङ्गालालको शहादतको इतिवृत्तमा केन्द्रित निबन्ध ‘मृत्युको वरदान’मा उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गरिएको छ । श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गरिएको छ । उनको त्यागप्रति गर्व भएको बताइएको छ । उनीप्रति श्रद्धाले शिर निहुराइएको छ । सलाम अर्पण गरिएको छ ।
यसरी ऐतिहासिक भूगोल, ऐतिहासिक पात्र, संस्कृति आदिलाई विषयवस्तु बनाइएको पच्चीसवटा निबन्ध भएको ‘जीवाश्म’ महतत्ववपूर्ण छ । इतिहास, संस्कृति, दर्शनमा रुचि हुनेका लागि यसले धेरै खुराक दिनेमात्र होइन, अनुमानको तथ्यगत पुनर्सिर्जन र तथ्यको अनुमानगत पुनर्सिर्जन गर्नुपर्ने पनि यसले बताउ“छ । अन्धविश्वासभन्दा वैज्ञानिक चिन्तन र प्रामाणिक तर्कले कतिपय पुरातन रूढ चिन्तनमा पुनर्विचार गर्न विवश पार्ने विषय पनि यसको उपलब्धि हो ।
साहित्यको एउटा विधा निबन्ध हो र यस कृतिको मूल्याड्ढन ऐतिहासिक आलोकमा नै गरिनुपर्दछ । प्रागऐतिहासिक विषयवस्तुको चिरफार गर्ने कला र क्षमतामा निपुणतातर्फको कृतिकार शीतल गिरीको यात्राको यो एउटा महतत्ववपूर्ण उपलब्धि हो ।
संस्कार: अन्धविश्वास या उत्तर आधुनिक व्यवहार
on 4:03:00 PM0Comment
आउने बित्तिकै मैले पण्डितजीलाई भनिदिएँ प्रश्नसूचक भावले, “किन आउनु भो मकहाँ ?”
प्लास्टिकको कुर्सीमा बस्न अलमल गर्दै थिए पण्डितजी। अप्रत्याशित र अकल्पनीय मेरो प्रश्नले अनुहारमा विषाक्तयुक्त अप्ठ्यारो हाँसोजस्तै भर्दै पण्डितजी बोल्छन्, “किन आउँदैमा के भइहाल्यो ?”
भर्खर कसैकहाँ पूजा गराएर आउँदै थिए। जसकहाँ पूजा गराए, खाना भने खाएनन्। उनको घरबाट निस्कनासाथ प्रहरीले देखिहाल्यो। बिहानको समय भएपनि प्रहरीले कडाइ गरेको छ बजार क्षेत्रमा। प्रहरीले देखेको पण्डितजीले थाहा पाएपछि चिटचिट पसिना आइहाल्यो । तर प्रहरीले केही पनि भनेन, सम्भवतः सहानुभूतिपूर्ण आँखाले हेर्दै अगाडि बढ्यो। मनभरि त्रास लिएर पण्डितजी बिहानै मेरो घरमा पसेका थिए।
“हामीलाई छुतका छ। यस्तो अवस्थामा अरू हामीकहाँ आउनुहुँदैन, अझ हामी पनि अरूकहाँ जानुहुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसमा त तपाईं पण्डितजी । अरूले के भन्लान् ?”
कोरोनाको कहरले बजारमा झन्डै कफ्र्यूको स्थिति रहेको छ। एकले अर्कालाई छुनुहुँदैन। सम्भव भए एक मिटर टाढा नै बस्नुपर्ने सबैतिरको सुझाव छ। त्यसमा पनि छुतकामा परेको मानिसको घरको नून चल्दैन, आगो चल्दैन, पानी चल्दैन। छुतकामा परेकालाई कसैले छुनुहुँदैन। उसको घरमा कोही पस्नुहुँदैन, ऊ पनि कसैको घरमा पस्नुहुँदैन। यी सब सामाजिक मान्यता हुन्।
पण्डितजी चिया खान तयार हुन्छन् । दूध आइपुग्न अलि ढिलै भएको हो। रातो चिया नै आउँछ। पण्डितजी चिया खान थाल्छन्। पण्डितजीको मेरो घरमा सम्मान छ, पहिलेदेखि नै। अलिक सहज महसूस गर्दछन्। सामान्यावस्थामा पनि उनी जसकसैकहाँ खाइहाल्दैनन्। मकहाँ कुनै बन्देजजस्तो उनको आत्माले स्वीकार गरेको मैले थाहा पाएको छैन। दुःखसुखका कुरा पनि हुने गरेको छ, हामीबीच।
मेरो घरमा पण्डितजीले पसेर कुनै गल्ती पो गरे कि ?
मेरो मनमा पनि परेको छ। पण्डितजीको मनमा झन् बढी परेको छ ।
मेरो मनमा पर्नुका पछाडि वार्तमानिक परिवेश र सांस्कृतिक परिबन्द दुवै उभिएका छन्। तर प्रमुख भने सांस्कृतिक कारणले नै बढी उक्साएको हो त्यसरी भनिदिन।
पण्डितजीको मथिङ्गललाई अप्रत्याशित मेरो प्रश्नले रन्थनाइदिएको मैले राम्ररी पढेको छु। मलाई पण्डितजीले धर्मकर्ममा धेरै अडिने भनिठान्दैनन्। तथ्य र तर्कमा बढी विश्वास गर्ने व्यक्ति ठान्दछन्।
अन्धविश्वास त अन्धविश्वास नै हो । आँखा चिम्लेर विश्वास गरिने विश्वास नै अन्धविश्वास हो। तथ्य दिन सकिंदैन, तर्क दिन सकिने अवस्था हुँदैन तर पनि नमान्न कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो हुन्छ । सामाजिक वा सांस्कृतिक बाध्यता वा विवशता पनि हुन्छ, कतिपय अवस्थामा। अहिले वैज्ञानिक किसिमले कुनै जवाफ दिन नसकिए पनि टाउको निहुराएर अन्धविश्वास वा अतार्किक व्यवहारलाई निर्वाह गरिरहनुपरेको हुन्छ।
कुनै संस्कृति त्यसै निर्माण भएको हुँदैन। संस्कृति निर्माण हुन दशकौं वा शताब्दीयौं लागेको हुन्छ। हाम्रो समाजमा श्राद्धको संस्कार निर्माणमा कति समय खर्च भयो ? यस प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक ठान्दैन वर्तमान ? कुन परिस्थितिमा छुतका मान्नुपर्ने प्रचलनको सुरुआत भयो होला ? यसको परिकल्पना गर्न पनि कतिपय वर्तमानले आवश्यक ठान्दैन ?
अहिले उत्तर आधुनिक जमाना जो छ। अरूमाथि प्रश्न ठड्याउन जानेको छ । प्रश्नको गहिराइलाई बुभ्mन हिच्किचाउँछ। जवाफ सुन्ने धैर्य राख्दैन । अन्धविश्वास भनेर आफ्नै प्रश्नको उत्तरको गहिराइ वा आत्मालाई बुभ्mन चाहँदैन। उत्तर आधुनिक सिद्ध गर्न त्यस्ता कुरालाई पन्छाउन गर्व गर्दछ।
अहिले उत्तर आधुनिक युगको कोरोना भाइरसले लाशलाई छुन दिंदैन, आफन्तलाई। धेरै निकटका आफन्त भए एक मिटरको दूरीमा रहेर लाश हेर्न सक्छ। छुन पाउँदैन।
हाम्रो संस्कारमा पहिलेदेखि नै आफन्तले अन्त्येष्टिभन्दा पहिले अन्तिमपटक मुख हेर्ने चलन छ, मृतकको । अन्त्येष्टिमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनेले सकेसम्म जीउमा कपडा लगाउँदैनन् र अन्त्येष्टिको एउटा तात्क्षणिक कर्म नुहाउनुलाई बनाएको छ। यदि कसैले कपडा लाएर मृतकलाई छोएका छन् भने लाएको सम्पूर्ण कपडालाई तत्कालै धुनैपर्ने हुन्छ। मृतकले प्रयोग गरेका लुगाफाटो पनि मिल्काइने गरिन्छ। उत्तर अत्याधुनिक रोग वा महामारी वा भाइरसबाट मृत्यु भएपछि प्रथमतः अन्त्येष्टि संस्कारमा नै आफन्तलाई जान दिइँदैन र यदि कोही नजीकसम्म पुगेका छन् भने प्रारम्भिक वा प्राथमिक सचेतना जीउमा लगाएको सम्पूर्ण कपडाको अत्यन्त विशिष्ट सफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ।
अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँमा चार दिनपछि पुगेर त्यहाँको खरानीसमेतलाई त्यहीं नछरिने वा हावामा नपिंmजिने गरी मिलाइन्छ। वार्तमानिक धरातलमा पाइला टेकेर नजीकबाट नियाल्दा खरानीसमेतलाई खुला छोड्नुहुँदैन भन्ने परम्परागत धारणाभित्र लुकेको उत्तर आधुनिक रहस्यलाई केलाउन सकिन्छ।
मृत्यु भएका मानिसको घरपरिवार र आफन्तलाई छुतका लाग्दथ्यो। अर्थात् उसले कसैलाई वा कसैलाई उसले छुनुहुँदैनथ्यो। छुँदैमा के भइहाल्छ ? भनेर प्रश्न गर्नेहरूले अहिले बुभ्mन थालेका छन्– यदि मृत्यु नै कुनै यस्तो सङ्क्रामक रोगका कारणले भएको हो भने सर्ने डर हुन्छ। यसलाई वैज्ञानिक छुवाछूत प्रथा पनि मान्न सकिन्छ।
मृत्यु संस्कारभित्र सरसफाइले पनि निकै ठूलो महŒव पाएको छ परम्परादेखि । मृत्यु हुने व्यक्तिको नजीकका आफन्तले दशौं वा एघारौं दिन घरलाई सफा गर्ने, लिपपोत गर्ने वा भुइँ तथा भित्तालाई पुछ्ने, सबै लुगाफाटा धुने, कपाल खौरिने, नङ काट्ने गर्दछन् । यदि आफन्तभित्रै अर्को कुनै व्यक्तिको पनि कुनै कारणले मृत्यु भएमा फेरि दश/एघार दिन पर्खिनुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी पनि बुभ्mन सकिन्छ– यदि कुनै सङ्क्रामक रोगबाट मृत्यु भएको हो वा होइन, त्यो परीक्षणको समय नै दश/एघार दिन हो, आफन्तको लागि। र कोरोनाजस्तो महामारीको सन्दर्भलाई यस संस्कारको आलोकमा विचार गर्ने हो भने यो संस्कारको उत्तर वैज्ञानिक परीक्षणजस्तो प्रकाशित हुन्छ। सरसफाइको महŒव वर्तमानले बुझेको मात्र नभई जमानामा हाम्रो समाजले बुझिसकेको रहेछ।
अहिले चौध दिन वा दुई हप्तासम्म हरेकले सामाजिक दूरीलाई निर्वाह गर्न सके भने महामारीलाई पैmलिनबाट रोक्न सकिने बताइरहेका छन्।
ते¥हौं दिन गाउँका भद्रभलादमीलाई बोलाएर श्राद्ध कर्म गर्नुपर्छ भनेको के हो ? आफन्तको मृत्यु भएको ते¥हौं दिन गाउँका भद्रभलादमीलाई बोलाउनु, आफन्त तथा नातागोतालाई बोलाएर आफूले ते¥ह दिनसम्म अलग्गै बसेको, समाजमा घुलमिल नगरेको अर्थात् सामाजिक दूरी कायम राखेको हो भन्ने कुराको साक्षी दिएका पो हुन् कि ? मृतकका आफन्त र समाजले समाजमा दिएको योगदानको सम्झना गर्ने र सामाजिक दूरीको अवधि पूरा भएपछि समाज उनीसित मिलेको भन्ने स्पष्ट पार्न सहभोजको आयोजन गर्ने चलन पो चलेको हो कि ?
यदि अतिविपन्न छन् भने घरका एकजनालाई भोज खुवाउँदा भयो। अझ एकजनालाई पनि खुवाउन सक्ने हैसियत नभएमा समाजका सदस्यहरूले भोजका सामग्री दिएर सहयोग गर्ने चलन छ। तर मूलमा त यो पनि देखिन्छ कि भोज खानु छ। जातमा मिलाउनु छ, समाजमा मिलाउनु छ। अर्थात्, अलगथलग भइसकेको परिवारलाई सामाजिक दृष्टिले समान बनाउनु छ।
भोजले मृत्युलाई पनि उत्सव बनाइदिन्छ, शोकको समयमा उत्सव आवश्यक छैन भनेर संस्कृतिलाई खिल्ली उडाउनेहरू पनि छन्। यसलाई अवैज्ञानिक चिन्तन मान्छन्। तर्क आफ्नो ठाउँमा रहेको छ तर बितेको करीब दुई हप्तामा हाम्रो घरपरिवार पूर्ण सुरक्षित छ, हाम्रो घरदेखि आफन्तसम्म सुरक्षित छौं भनेर खुशी अभिव्यक्त गर्ने र समाजले पत्याउने एउटा मेसोको रूपमा पो लिइएको हो कि संस्कारले ?
यसैभित्रको रहस्यात्मकतालाई खोतलौं न। दश दिनसम्म नङ पनि काट्न नहुने र कपाल पनि छाँट्न नहुने किन ? सम्भवतः नङ काटेर तथा कपाल छाँटेर कतै फाल्नुपर्ने अवस्थामा काटेर फालिएको नङ र कपालबाट पनि रोग पो सर्ने हो कि ? तर दश/एघार दिनसम्म समाजले परीक्षण गरेर बल्ल नङ काट्ने तथा टाउको खौरिने र दारी ताछ्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ। अहिले उत्तर आधुनिक विज्ञानले पनि हरेक बीस मिनेटमा नङभित्रसमेत पिंmज पुग्ने गरी साबुन पानीले मिचिमिची हात धुनुपर्ने अ¥हाइरहेको छ। कपालबाट पनि महामारीको भाइरस सर्छ भनिरहेको छ । अनि हाम्रो संस्कारले नङ र कपाल काटेर गाउँमा नफाली कतै बाहिर लगेर फाल्नुपर्ने तथ्यमा लुकेको वैज्ञानिक रहस्य आपैंm आलोकित भएको देखिएको छ।
यसबाट यो पनि जानकारी भइरहन्छ कि फलानो घरपरिवारमा कसैको मृत्यु भएको थियो। अभैm कोही कसैलाई शङ्का भए टाउको खौरेकाहरूबाट केही दिन टाढा बस्न सकिन्छ। सजिलै चिन्न सकिने भएकोले आवश्यकता महसूस गर्नेले सावधानी अपनाउन सजिलो हुन्छ।
यस प्रकारका संस्कारहरूलाई वैज्ञानिक परीक्षण नगरी अँध्यारोमा तिर हानेजस्तै गरी एकैचोटि अन्धविश्वासको पगरी पहि¥याउँदा संस्कारमाथि अन्याय होला नहोला, पछि थाहा हुन्छ तर विज्ञानमाथि पनि अन्धविश्वासको छाप लाग्ला कि भन्ने डर उत्पन्न हुन्छ किनभने हरेक वैज्ञानिक तथ्य र सत्य जहाँ पनि वा जहिले पनि परीक्षण गरेर प्रमाणित गर्न सकिन्न। यसको लागि उचित वातावरणको आवश्यकता पर्दछ।
पण्डितजीले चिया खाइसकेका छन् । अब सेनिटाइजरको प्रसङ्ग कोट्याउँछन्। उनको भावना छ– एउटा सानो सीसी भएपनि पाए हुन्थ्यो। हामीले प्रयोग गरिरहेको सेनिटाइजरको सानो सीसी टेबलमैं छ तर पण्डितजी छुन/उठाउन डराउँछन्। अलिक सतर्क आँखाले उत्सुकता व्यक्त गर्दछन्, प्राप्तिको आशामा।
पानी पनि छुनुहुँदैन भन्ने छ नि हाम्रो संस्कारमा। कुनै भाँडाबर्तन पनि छुनुहुँदैन नि।
यदि कसैमा कोभिड–१९ भाइरसको सङ्क्रमण छ भने उसले छोएको सामान अरूले छुँदा पनि सङ्क्रमण हुने खतरा रहेको वर्तमानले बताएको छ।
अझ किरिया लिने मानिसको नजीक पनि जानुहुँदैन भनिन्छ।
किरिया लिने मानिसले मृतकको लाशलाई चलाएको हुन्छ। सबैभन्दा नजीक रहेर काम गरेको हुन्छ। यसै कारण उनको नजीक कोही जानै हुन्न भनिएको हुनुपर्छ। यसको परिपालनाको लागि किरिया बोक्नेको हातमा बाँसको हरियो लठी पनि दिइन्छ। कमसेकम त्यो लठी बराबरको दूरीमा रहेर उसले कोही कसैसित कुराकानी गर्नुपर्दछ। सुत्दा, बस्दा पनि ऊ नितान्त एक्लो हुनुपर्छ। सुत्दा पनि खाटमा सुत्नुहुँदैन, कुर्सीमा बस्नुहुँदैन। अहिले हेर्दा, कोही सङ्क्रमित खाट वा कुर्सीमा बसेको छ भने त्यसबाट पनि सर्ने खतरा रहन्छ। यस कारण सबैलाई सेनिटाइज गर्नुपर्दछ। हाम्रो समाजले पहिलेदेखि नै बस्न रोकेको देखिन्छ।
अँ, कसैले कुनै वस्तुलाई छोएको छ र त्यसलाई अहिले पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने सेनिटाइज गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। संस्कारले पनि यस अवस्थामा राम्ररी धोइपखाली प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको छ।
संस्कारले माछामासु पनि परहेज गरेको छ, छुतका परेकालाई। अहिले स्पष्ट भइरहेको छ, सङ्क्रामक रोगको समयमा सकेसम्म माछामासु खानुहुँदैन।
अज्ञान पनि अन्धविश्वास नहुन सक्दछ किनभने वैज्ञानिकताको कसीमा जाँच्ने उपयुक्त वातावरण नहुँदासम्म अज्ञानलाई परिभाषित गर्न सकिन्न। अज्ञानभन्दा केही पृथक हुन सक्छ अन्धविश्वास। अन्धविश्वास भनिएको पनि विज्ञान हुन सक्छ। उत्तर आधुनिक विज्ञानले प्रमाणित गर्न बाँकी रहेको विज्ञान हुन सक्छ, कतिपय संस्कार। अभैm पनि उत्तर आधुनिक विज्ञानको पहुँचभन्दा टाढा हुन सक्छ, अन्धविश्वासको आरोप लागिरहेका कतिपय व्यवहारहरू।
आफूमा परीक्षण गर्ने क्षमता नहुँदा तथा आफ्नो वरपर परीक्षण गर्ने वातावरण नहुँदासम्म सामाजिक प्रचलनहरूमाथि ठाडो आरोप लगाउनु पनि अन्धविश्वास हुन सक्छ। आँखा चिम्लेर अन्धविश्वासको आरोप लगाउनु पनि अवैज्ञानिक हुन सक्छ। समय र परिवेशले हाम्रा कतिपय प्रचलनलाई विज्ञानले नै आत्मसात गर्नुपर्ने बताएको छ।
“सेनिटाइजरमा त अल्कोहलको मात्रा बढी हुन्छ। अल्कोहल भनेको घुमाउरो तरीकाले दारु नै भन्न खोजेको हो। छुतका रहेको एउटा मानिसले अझ सेनिटाइजरको नाममा अल्कोहल दिनु उचित हुन्छ ? अझ पण्डितजीले छुतका परेको घरबाट अल्कोहल लिनु उचित हुन्छ ?”
मेरो जिज्ञासालाई शान्त पार्दै पण्डितजी भन्दछन्, “यो दारु हो कि होइन, एउटा पक्ष हो तर यसको उपयोग औषधिको रूपमा गर्नुछ। यदि दारु नै भएपनि फरक पर्दैन किनभने यसको उपयोग दारुको जस्तो गर्नु छैन।”
हो नि। यदि दारुको उपयोग पनि औषधिको रूपमा गरिन्छ भने त्यसले दिने परिणाम फरक आउँछ। पण्डितजीको दारुमाथिको वैज्ञानिक तर्कले उत्तर आधुनिक वैज्ञानिक चिन्तन झल्किन्छ।
“यसभन्दा पहिले कहिल्यै सेनिटाइजर कस्तो हुन्छ, देखेको थिइनँ, यसको बारेमा सुनेको पनि थिइनँ तर अब यसको प्रयोग गाउँमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” पण्डितजीको पछिल्लो कथनले पण्डितजीको माध्यमले गाउँमा पनि वैज्ञानिक चिन्तन प्रवेश गरिरहेको छनक दिन्छ।
सामाजिक व्यवहारको वैज्ञानिकताबाट हामी अज्ञानित रहेर आफूलाई आधुनिक देखाउन कतिपय अवस्थामा अत्यधिक जान्ने भएर हात्तीले पानी खाएको अनुमानको आधारमा शब्दभेदी बाण चलाउने क्षमतावान् दशरथले श्रवणकुमारको शिकार गरेजस्तै पनि हुन सक्छ। अन्धविश्वासको तीरले विज्ञानको शिकार गरेको पनि हुन सक्छ ।
यद्यपि संस्कारको नाममा रहेका अन्धविश्वास, कुसंस्कार, कुरीति, पछौटेपन, गरीबमारा चलनहरूलाई निमिट्यान्न पार्नै पर्दछ। संस्कारको नाममा अन्धविश्वासलाई बढावा दिनु राम्रो होइन । सामाजिक व्यवहारको निहुँमा वैज्ञानिक चिन्तन र व्यवहारको बाटोमा कुनै किसिमको तगारो लगाउन पाइन्न। विज्ञानको उज्यालोबाट हरेक संस्कार, संस्कृति र चलनको परीक्षण आवश्यक छ।